Tifatiraha sawirada – Windows – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawirada
Isku-duwaha Wadajirka – aalad lagu shaqeeyo sawirada iyo sawirrada. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay miirayaal fara badan wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad ku darto saamaynta kala duwan ama aad u abuurto mashaariic si toos ah.
Focus Magic – waa barnaamij lagu habeeyo jilicsanaanta sawirrada jilicsan. Softiweerku wuxuu xaqiijiyaa soo kabashada tayada muuqaalka iyadoo la xoojinayo ama daciifineyso diiradda.
Kani waa software si loo abuuro sawir sawir leh, albaabada sawirada, boostarada ama mashruucyo kale oo hal abuur leh adigoo isticmaalaya waxyaabo kala duwan iyo astaamaha qaabeynta.